Raikitra ny baolina
2007-05-15 @ 08:30 in Izaho sy ny ahy
Dia raikitra izany ny baolina izay efa nikofohana hatrizay. Mondialido no iantsoana azy ka anisan'ny mandray anjara ny Malagasy eto Roma. Ny ekipan'i Japon no nanao taminay. Resy 4-2 aloha tamin'ny alahady na dia nitarika tamin'ny isa 1-0 aza. Efa saika nandresy satria dia taimbaolina (hoy ry zalahy) ny baolina 2 maty. Nahafinaritra ny fiarahana. Ny mpitehaka koa nihoraka mafy mihitsy. Ry zareo koa moa hatramin'izay efa zatra ny mahita faharesena goavana ka mba tsy dia nampaninona azy loatra ny 4 sy 2. Tonga nitehaka sy nitondra ranomboankazo teny koa i Mme Josiane vadin'ny Ambassadeur... (izy koa tsy manque mihitsy :-))
Afaka tapa-bolana indray ny lalao manaraka izay hihaonanay amin'ny Ukranianina. Maozatra hono ry zalahy ireo fa dia ho hita eo. Efa be koa aminay ny tsy tanora intsony (excuse hafa koa io) koa mbola tsy tapitra akory ny vanimpotoana voalohany(45mn) dia efa mijerijery eny amin'ny mpanazatra sahady mitaky mpisolo. Amin'ny alahady anefa dia mety tsy hisy fanazaran-tena sahady satria hiara-mirona amin'ny "Festa dei Popoli" indray izahay.
Ah... nidina défense aho, sady défense gauche. Toerana mbola tsy hitako hatr'izay niainako. Fa hitako hoe tsy dia mandreraka loatra. Mba tsy voan'ny krampy (isaorana an'Andriamanitra) satria afaka maka aina tsindrainidray. Efa mihinana akondro sy kiwi isan'andro aloha dia misotro rano betsaka koa. Forza ragazzi!!!